Diblumaasiyadda Coronavirus: Sida uu Covid-19 usii hurinayo xiriirka Caalamiga ah - Tilmaan Media
Spain waxay ka mid tahay dalalka uu sida ba`an u saameeyay xanuunka safmarka ah ee Coronavirus waxayna aad ugu baahi qabtaa qalab caafimaad, gaar ahaan gobollada laga soo sheegayo kiisaska ugu badan ee Covid-19.
Balse dadaallada ay ku heli lahayd qalabkaas waxaa carqaladeeyay dagaalka ay kula jirto dowladda Turkiga, iyadoo soo dhoofinta boqollaal qalabka bukaannada ka caawiya neefsashada oo ay soo iibsadeen hay`ado caafimaad oo ka howlgala saddex gobol oo Spain ka tirsan ay la wareegtay dowladda Turkiga.
Warbaahinta Spain ayaa ilo gudaha ah ka soo xigatay in qalabkaasi la dhacay.
Kaddib is jiid jiid socday muddo toddobaad ah, wasaaradda arrimaha dibadda Spain ayaa la wareegtay qalabka caafimaad. Balse dhacdadan waxay tusaale u tahay sida Covid-19 uu u hurinayo xiisadda diblomaasiyadeed ee dunida.
Xaggee ayay xiisadahaas ka jiraan?
Waa dhab in xurgufta ka dhaxeysa Mareykanka iyo Shiinaha ay u muuqato mid sababeysa hanjabaad, gaar ahaan hanjabaaddii Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahayd inuu joojin doono dhaqaalaha uu siiyo Hay`adda Caafimaadka Adduunka ee (WHO) oo uu ku eedeeyay inay la safan tahay Shiinaha.
Balse xiisado kale ayaa ka jira qeybo kale oo dunida ka mid ah. Mar walbana maaha inay ku lug leedahay Shiinaha, oo wajaheysa cambaareyn ku aaddan inaysan ka run sheegin tirade kiisaska fayraska.
“Waxay ahayd inaan aragno dalalka oo isku imaanaya xilligan oo aan dhammaan hal dagaal ku jirno,” ayay tiri Sophia Gaston, oo ah baari arrimaha bulshada iyo siyaasadda kana tirsan Mahcadka Arrimaha Dibadda ee London School of Economics.
“Ficil ahaan, xasaraddan waxay dalalka ku qasabtay inay isku soo jeestaan, iyagoo ku jira tartan in ka badan intii ay is kaashan lahaayeen.”
Waxaa tusaale loo soo qaadan karaan xiisadda ka dhex taagan dalalka Midowga Yurub.
Markii kiisaska Covid-19 ee Talyaaniga ay cirka isku shareereen, wuxuu dalalka deriska ah ka codsaday caawinaad dhanka qalabka caafimaadka ah. Balse Jarmalka iyo Faransiiska ayaa labaduba mamnuucay dhoofinta qalabkaas.
“Tani calaamad fiican uma aha isku duubnida Yurub,” ayuu ku yiri qoraal uu barta Politico ku qoray safiirka Talyaaniga u fadhiya Brussels, Maurizio Massari.
Dadka Talyaaniga lama aysan dhicin arrintaas, Berlin waxay ka mid tahay dalalka ka soo horjeeda in la caawiyo dalalka Yurub ee sida ba`an uu u saameeyay xanuunka safmarka ah.
‘Diblomaasiyadda maldahan’ ee Shiinaha
Dalalka Netherland, Austria iyo Finland ayaa sidoo kale si wada jir ah uga soo horjeestay qorshaha, halka Spain, Faransiiska, Biljamka, Giriigga, Ireland, Portugal, Slovenia iyo Luxembourg ay taageeeen qorshaha. Waxay taasi muujisay in kala qeybsanaan weyn ay u dhaxayso dalalka Midowga Yurub.
Talyaaniga ayaa sidoo kale tusaale u ah waxa ay khubarradu ugu yeereen”diblomaasiyadda maldahan”: ee Shiinaha. Kaddib markii uu Talyaanigu si iskiis ah ula tacaalay coronavirus, Beijing ayaa dalal badan oo qaarado kala duwan ku yaalla ku harqisay caawinaad xakameynta fayraska ah, waxaa dalalkaas ka mid ah Ruushka.
Rome ayaa heshay deeqo caafimaad, qalabka baaritaanka iyo xitaa dhaqaatiir ka yimid Shiinaha oo loo aqoonsaday geesiyaal. Xaqiiqdii, hal-ku-dhigga #grazieCina (Mahadsanid Shiinaha) ayaa ku baahay baraha bulshada Talyaaniga.
Gesu Antonio Baez, agaasimaha sare ee Pax Tecum, oo ah shirkad la talin oo xarunteedu tahay London kana faalloota arrimahadiblomaasiyadda iyo horumarka caalamka, ayaa sheegtay in taasi looga faa`iideysanayo buuxinta kaalinta Mareykanka uu gabay – taas oo ay uga sii dartay halheyska Donald Trump ee ah “Ameerika mudnaanta hore” tan iyo markii uu xilka madaxtinnimo qabtay sanadkii 2016.
Marka laga soo tago dagaalka ay Washington kula jirto Shiinaha, Trump ayaa ka yaabiyay Jarmalka kaddib markii uu isku dayay in Mareykanka uu u gaar yeelo tallaalka xanuunka Covid-19 ee ay soo saareyso shirkad caafimaad oo Jarmalka laga leeyahay.
Dhowaan madaxweynaha ayaa ka digay inuu ka aargoosan Hindiya, sababo la xiriira go`aankeeda ku aaddan mamnuucidda dhoofinta dawada looga hortago duumada ee hydroxychloroquine, taas oo la tijaabiyay in lagu daweyn karo Covid-19.
“Mareykanku gacan kama uusan geysan xasaradda xilligan taagan, Shiinaha ayaana haatan haysata fursadda buuxinta kaalintaas,” ayuu yiri.
“Diblomaasiyadda maldahan” ma aha hannaan qurux badan, sida ay Brazil muujisay. Fakradda laga qabo in Shiinaha uu ku guuldarreystay wax ka qabashada dillaacitaankii hore ee Covid-19 ayaa ka careysiisay dunida, sida ay aaminsan tahay Sophia Gaston.
Muranka Shiinaha iyo Brazil ee baraha bulshada
Waxay sheegtay in sirdoonka Mareykanka uu ku eedeeyay Shiinaha inay qariyeen tirada dhimashada ka dhalatay fayraska ee dalkaas – saraakiisha Britain ayaa sidoo kale su`aal geliyay xogta rasmiga ah ee Shiinaha.
Brazil ayaa ka mid ah dalalka kale ee wax iska weydiinaya siyaasadda Shiinaha: Beijing iyo Brazil ayaa dhowr jeer murmay tan iyo bilowgii xanuunka safmarka ah.
Wuxuu xaalku gaaray heer diblomaasiyiin Shiinees ah iyo xubno ka tirsan xulafada hoose ee madaxweyne Jair Bolsonaro ay hadallo xanaf leh isku dhaafsadaan baraha bulshada.
Dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd, markii wasiirka waxbarashada Abraham Weintraub uu ka careysiiyay saraakiisha Shiinaha, kaddib markii uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in dalalka Aasiya ay yihiin cunsuriyaal.
“Hadallada noocaas oo kale ah waa aflagaaddo waxaana ka dhadhamaya cunsuriyad,” ayaa lagu yiri qoraal Twitter-ka ay soo dhigtay Safaaradda Shiinaha ee Brasilia.
Shiinaha waa saaxiibka ganacsi ee ugu weyn ee Brazil – waxay iibsataa 80% wax soo saarka digirta soya ee dalkaas, dhanka kalena waaxaha caafimaadka Brazil ayaa la daalaa dhacayay in qalabka bukaannada ka caawiya neefsashada ay ka helaan Shiinaha, kahor faragelinta Weintraub.